News – Page 110 – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
कालो दिनको स्मरणमा अरुण पूर्वका ९ जिल्ला बन्दले जनजीवन प्रभावित
धरान । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लिम्बुवान राज्य परिषद्ले आह्वान गरेको वन्दका कारण अरुण पूर्वका नौ जिल्लाको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । बन्दका कारण पूर्वका ताप्लेजुङ, पाँचथर, ईलाम, झापा, सुनसरी, मोरङ, तेहथुम, धनकुटा र संखुवासभामा यातायात र बजार पसल ठप्प रहेका छन् । प्रेस, कूटनीतिक नियोगका गाडी, दमकल र एम्वुलेन्सबाहेक कुनै पनि सवारी साधन चलेका छैनन् […]
बिदाको विरोध गर्दै आएका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले किन लिदैछन् १७ दिन सम्म छुट्टी?
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अगस्टको गर्मीलाई छल्नका लागि भन्दै आम नागरिकसरह छुट्टी लिएर बस्ने भएका छन् । यसअघि छुट्टीका विरोधीका रुपमा देखिएका उनी १७ दिन विदा लिएर न्यु जर्सीको वेस्टमिन्स्टरस्थित आफ्नो निजी गल्फ क्लबमा बिताउन लागेका हुन् । उनले ह्वाइट हाउसबाट ‘वर्किङ भ्याकेशन’ का रुपमा छुट्टी लिन लागेका हुन् । आफूलाई कामबाट कहिल्यै […]
भरतपुर महानगरपालिकामा रेणु दाहाल विजयी, उपमेयरमा काँग्रेसकी पार्वती शाह
चितवन । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल विजयी भएकी छन् । गत वैशाख ३१ गते भएको निर्वाचनको मतगणनाका क्रममा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेपछि उत्पन्न विवादा तीन महिनाभन्दा लामो समयको बहसपछि सर्वोच्चले पुनः मदतादनको फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार साउन २० गते भरतपुर १९ मा निर्वाचन भएको थियो । शनिबार अबेर […]
डोटीको गगुडाधारमा भएको जीप दुर्घटनामा ९ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । डोटी जिल्लाको बोगटान गाउँपालिका–६ गगुडाधारमा भएको जीप दुर्घटना परी ९ जनाको घटनास्थलमै ज्यान गएको छ । दिपायलबाट यात्रु लिएर बोगटानतर्फ हिँडेको शैलेश्वरी यातायातको से १ ज ४९१ नम्बरको जीप गएराती १० बजे दुर्घटनामा परेको थियो । उक्त दुर्घटनामा ६ जना घाइते भएका छन् । स्थानीय प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार बोगटान गाउँपालिका—१, सिमचौरका ३५ […]
Posted in: mainNews, National News, Uncategorized
वैद्यले डा.गोविन्द केसीलाई भने, “तपाईंको सत्याग्रहप्रति हाम्रो ऐक्यबद्धता छ, स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला”
काठमाडौं । चिकित्सा क्षेत्र सुधारका विभिन्न मागहरु अगाडि सार्दै ११ औं पटक अनसनरत डा.गोविन्द केसीको अनसनको १२ औं दिन शुक्रबार नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का अध्यक्ष मोहन वैद्य‘किरण’ले डा. केसीका मागहरुप्रति अनसन स्थलमै पुगेर ऐक्यवद्धता जाहेर गरेका छन् । डा. केसी अनसनरत शिक्षण अस्पतालमा बेलुका ५ बजेतिर पुगेका अध्यक्ष वैद्यले डा. केसीलाई भेटेर भने, “तपाईंले अगाडि सारेका […]
मधेस–पहाडका जनता लडाएर राष्ट्रवादको नारा : देउवा
जनकपुर । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा मधेस र पहाडका जनतालाई लडाएर राष्ट्रवादको नारा दिएको आरोप लगाएका छन् । धनुषको जनकपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा देउवाले एमालेको हठका कारण संविधान सशोधन प्रस्ताव पारित हुन ढिलाइ भएको बताए । उनले संविधान संशोधन प्रस्ताव आफूले कुनैपनि हालतमा पारित गराएरै छाड्ने दाबी गरे । एमालेलाई मधेसी […]
पहिरोले पुरिएर बाग्लुङमा एकै परिवारका चारसहित ५ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । बाग्लुङमा पहिरोमा परी एकै परिवारका चारसहित पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । पहिरोमा पुरिएकर एक जना वृद्धा वेपत्ता भएको बताएको छ । अविरल वर्षापछि निशीखोला–२ बाहुन गाउँमा गएको पहिरोमा पुरिएर एउटै परिवारको चारजनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा ६८ वर्षका मनिमान छन्त्याल, उनकी श्रीमती ६३ वर्षकी नन्दकली, बुहारी २२ वर्षकी बिन्दु र […]
अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनको संक्षिप्त परिचय
उन्नाइसौं शताब्दीको पूर्वाद्र्धतिर जुन सबैखाले पुँजीवादले चरम विकास गर्दै अगाडि बढ्यो र त्यसको गर्भबाट त्यसकै चिहान खन्ने शक्तिका रुपमा औद्योगिक मजदुर वर्गको जन्म भयो, त्यही अवधिमा पुँजीवाद र सबैखाले प्रतिक्रियावादका विरुद्ध विश्व सर्वहारावर्ग र उत्पीडित जनसमुदायको युगान्तकारी तथा ऐतिहासिक अभियानलाई विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन भनिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनका संस्थापक नेता कार्ल माक्र्स (१८१८–१८८३) र फ्रेडरिक […]
Posted in: Bichar, Feature News, International News, mainNews
डोकलामबाट सैनिक हटाउन या गम्भीर परिणाम भोग्न चीनको चेतावनी
एजेन्सी । चीनले भारतलाई डोकलाम क्षेत्रबाट सैनिक नहटाएमा गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ । दिल्लीस्थित चीनका एक वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ लिउ जिनसोङले भारतीय सैनिक डोकलाम इलाकामा अवैध रुपमा सीमा पार गरेको भन्दै तत्काल सेना फिर्ता गर्न चेतावनी दिएका हुन् । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले डोकलाम क्षेत्रमा उत्पन्न विवादलाई लिएर १५ पृष्ठ लामो विस्तृत दस्तावेज जारी गरेको […]
राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा.वाग्ले
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा.स्वर्णीम वाग्लेलाई नियुक्त गरेको छ । बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाग्लेलाई योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा.मिनबहादुर श्रेष्ठले मंगलबार राजीनामा दिएपछि सरकारले नयाँ उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको हो । बिहीबार उपाध्यक्षमा नियुक्त वाग्ले यसअघि श्रेष्ठ र गोविन्दराज पोखरेल उपाध्यक्ष हुँदा आयोगको सदस्य […]